क्यान्सरसँग युद्ध लडिरहेकी सोनालीले आँखा देख्न छाडिन् ! « Onlinetvnepal.com
क्यान्सरसँग युद्ध लडिरहेकी सोनालीले आँखा देख्न छाडिन् !
Published :6November, 2018 8:00 pm
एजेन्सी- बलिउडकी चर्चित नायिका सोनाली बेन्द्रे अहिले अमेरिकामा क्यान्सरको उपचार गराइरहेकी छिन्। केहि महिनाअगाडी उनलाई क्यान्सर भएको खबरले पूरै बलिउडनै चिन्तित बनेको थियो।
उनलाई हाईग्रेड क्यान्सर भएको हो। उनी अहिले न्यूयोर्कमा उपचार गराइरहेकी छिन्। हालसालै उनले आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति बारे सामाजिक संजाल मार्फत जानकारी गराएका छन्।
कीमोथेरापिको कारण आफू आँखा कम देख्न थालेको उनले सामाजिक संजाल मार्फत जानकारी गराएकी हुन्। कीमोथेरापिको कारण पूरै शारिरनै कम्जोर हुने चिकित्सकहरु बताउने गर्छन्।
बलिउडकी चर्चित नायिका सोनाली बेन्द्रे अहिले अमेरिकामा क्यान्सरको उपचार गराइरहेकी छिन्। केहि महिनाअगाडी उनलाई क्यान्सर भएको खबरले पूरै बलिउडनै चिन्तित बनेको थियो। उनलाई हाईग्रेड क्यान्सर भएको हो। उनी अहिले न्यूयोर्कमा उपचार गराइरहेकी छिन्। हालसालै उनले आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति बारे सामाजिक संजाल मार्फत जानकारी गराएका छन्।
कीमोथेरापिको कारण आफू आँखा कम देख्न थालेको उनले सामाजिक संजाल मार्फत जानकारी गराएकी हुन्। कीमोथेरापिको कारण पूरै शारिरनै कम्जोर हुने चिकित्सकहरु बताउने गर्छन्। कीमोथेरापिको असरको कारणनै उनले आँखा कम देख्न थालेको बुझिएको छ। अघिल्लो पटकको कीमोथेरापिको कारण उनलाई पुस्तक पढ्न गार्हो भएको भन्दै सामाजिक संजालमा सोनालीले पोष्ट गरेकी हुन्।
तर अहिले पनि उनलाई पुस्तक पढ्न खासै गार्हो नभएको पनि यसै पोष्ट मार्फत उनले जानकारी गराएकी छिन्। आफ्नो समय उनी पुस्तक पढेर व्यतित गरिरहेकी छिन्।
अमेरिकामा उपचार गराइरहेकी उनलाई भेट्न धेरै बलिउड स्टारहरु न्यूयोर्क पुग्ने गरेका छन्। उनको हौसला उच्च राख्नको लागि उनका नजिकका मित्रहरु मात्र नभई बलिउडमा धेरै हस्तीहरु अमेरिका पुगेर उनलाई भेटेको समाचारहरु आउनेनै गर्छन्।
उनलाई हाईग्रेड क्यान्सर भएको हो। उनी अहिले न्यूयोर्कमा उपचार गराइरहेकी छिन्। हालसालै उनले आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति बारे सामाजिक संजाल मार्फत जानकारी गराएका छन्। कीमोथेरापिको कारण आफू आँखा कम देख्न थालेको उनले सामाजिक संजाल मार्फत जानकारी गराएकी हुन्। कीमोथेरापिको कारण पूरै शारिरनै कम्जोर हुने चिकित्सकहरु बताउने गर्छन्।
कीमोथेरापिको असरको कारणनै उनले आँखा कम देख्न थालेको बुझिएको छ। अघिल्लो पटकको कीमोथेरापिको कारण उनलाई पुस्तक पढ्न गार्हो भएको भन्दै सामाजिक संजालमा सोनालीले पोष्ट गरेकी हुन्।
जिस्म २ को पहिलो गीत सार्वजनिक !
चलचित्र “जिस्म” को सिक्वेल “जिस्म २”को पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । चलचित्रको गीतमा ग्ल्यामरलाई
आफ्नो कामुक अवतार देखाउन,हट देखिन स्तनको प्लास्टिक सर्जरी गर्ने पाँच बलिउड अभिनेत्री !
आफु सुदर साथै कामुक देखिनको लागि नायिकाहरुले विभिन्न तरिका अपनाउने गर्छन् । फेस प्लास्टिक सर्जरी
हेर्नुहोस् भद्रगोलका जयन्तेको सुन्दर परिवार ! (फोटो फिचर)
नेपाली चर्चित हास्य टेलिश्रंखला ‘भद्रगोल’ का लोकप्रिय कलाकार गोविन्द कोइराला ‘जयन्ते’ भद्रगोलकै कारण चर्चामा रहेका
भाइरल २ वर्षिय साइलिनले दुनियालाई नै चकित बनाए…..(हेर्नुहोस् भिडियो)
२ बर्षीय साइलिन श्रेष्ठ अहिले चर्चित भएकी छिन् । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेकी प्रतिभावान २७
बच्चा नभएर तनाबमा हुनुहुन्छ ? जोडी मिलाउने र निःसन्तानलाई सन्तान दिने दुप्चेश्वर महादेव !
दुप्चेश्वर महादेव मन्दिर नुवाकोट जिल्ला को राउतबेसी गाविसमा अवस्थित धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो । विशेषगरी
पतिलाई आफ्नो खुट्टामा झुक्न बाध्य नै पार्ने गर्छन् यी ३ राशि भएका महिलाहरु ! जानी राखौ
विवाह पछि श्रीमान श्रीमती बीच कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने धेरैको चासो हुने गर्छ। विवाह पछि
हेर्ने पर्ने भिडियो: रबि लामिछाने सर मेरो भगवान हुन् , ईराकमा बेचिएकि चेलीको डर लाग्दो कथा ! दलालको गरिन फर्दफास…(हेर्नुहोस् भिडियो)
काठमाडौं – आफू इराकमा बेचिएको भन्दै एक युवतीले नेपाल फर्काइदिन गुहार माग्दै हामीलाई भिडियो पठाएपछि
बच्चा नभएर तनाबमा हुनुहुन्छ ? जोडी मिलाउने र निःसन्तानलाई
पतिलाई आफ्नो खुट्टामा झुक्न बाध्य नै पार्ने गर्छन् यी
हेर्ने पर्ने भिडियो: रबि लामिछाने सर मेरो भगवान हुन्
ग्यास्ट्रिकका उपचार अब आफैँ गर्न सकिने, एस्ता छन् घरेलु